Passport photo Size လုပ်နည်း ~ mgkhainghtoo
22:21 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ကဲ့အထက်ပါ ပုံကဲ့သို့ Passport Size လုပ်ကြည်ရအောင်။ ပထမ File> Open ထဲက ပုံတစ်ပုံကို ယူလိုက်ပါ။
ကဲ့ပြီးတော Tool Box က Crop Tool ကို ယူလိုက်ပါ။
Crop Tool ကို Click လိုက်ရင် အောက် Tool Option Bar မှ Crop Tool နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပေါ်လာပါလိမယ်။
Width:3.5 cm ။ Height: 4.5 cm ။ Resolution: 300 ထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော အောက်ပါကဲ့သို့ Crop Tool နဲ ပုံကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
အခု မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပုံဟာ 3.5 4.5 ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော ဘေးက အနားအဖြူကွက်အတွက် Menu Bar မှ Image>Canvas Size (Alt+Ctrl+C) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်ပါကဲ့သို့ Box တစ်ခု ပေါ်လာမှာပါ။
အထက်ပါ Box ထဲမှာ Width:2/ Height:2mm ထားလိုက်ပါ။
Canvas Size ကို လုပ်ပြီးသွားရင် အထက်ပါပုံကဲ့သို့ အနားက အဖြူကွက်လေးတွေ့ကို မြင်ရမှာပါ။
ပြီးတော Menu Barမှ Edit>Define Pattern ကို Click လိုက်ပါ။
Define Pattern ကို Click လိုက်ရင် အောက်ပါကဲ့သို့ Box တစ်ခု ကျလာမှာပါ။
အထက်ပါ Box မှာ Name: Nay တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော ok နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော Photo ပုံကို Close ပိတ်လိုက်ပါ။ ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ Yes and No နှစ်ခုမှာ No ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော New File တစ်ခု ဖွင့်လိုက်ပါ။
အထက်ပါ New Box မှာ Width: 15. Height: 10 . Resolution: 300 ထားလိုက်ပါ။
အထက်ပါ New Box ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ပြီးတော Menu Bar မှ Edit>Fill ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Fill ကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါကဲ့သို့ Box တစ်ခုကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
အထက်ပါ Box မှာ Use: Pattern ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ Custom Pattern: မှာ မိမိ သိမ်ထားတဲ့ပုံကို Click လိုက်ပါ။ ပြီးတော ok ပါ။
အထက်ပါကဲ့သို့ ပုံတွေ့ကိုတွေ့မြင့်ရမှာပါ။ အဲဒီ ပုံတွေ့ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ ပုံအပိုင်တွေ့ကို ဖျက်ကြရအောင်။
Layer Box ကို ဖော်လိုက်ပါ။ F7 နှိပ်လိုက်ပါ။
အထက်ပါ Layer Box မှာ Lock ကို mouse နဲ့ ဖီဆွဲပြီး အောက်ပါ အနီကွက်ပြထားတဲ့ Delete နေရာကို ဆွဲလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် Lock က ပျောက်သွားမှာပါ။
ပြီးတော New Layer တစ်ခု ယူလိုက်ပါ ပြီးတော အဲဒီ New Layer ကို ပုံ Layer အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်ပါ။
ပြီးတော ပုံ Layer ကို Select ချလိုက်ပါ။
အထက်ပါကဲ့သို့ ပုံLayer ကို Select လုပ်ပြီးရင်။ Tool Box က Rectangular Marquee Tool ကို ယူလိုက်ပါ ပြီးတော မိမိလိုအပ်တဲ့ နေရာကို Marquee Tool နဲ့ Select လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အထက်ပါပုံကဲ့သို့ Select လုပ်ပြီးသွားရင် Menu Bar မှ Select>Inverse (Shift+Ctrl+I) နှိပ်လိုက်ပါ။
Inverse ကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါပုံကဲ့သို့ Select နှစ်ခု တွေ့မြင့်ရမှာပါ။
ပြီးတော KeyBound က Delete ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ မလိုအပ်တဲ့ ပုံအပိုင်အစတွေ့ ဖျက်သွားမှာပါ။
ပြီးတော Select တွေ့ကို ဖျက်ရအောင် Ctrl+D နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော ပုံတွေ့ ကို Document အလယ်သို့ ပိုကြည်ရအောင်။
ပုံအောက်က Layer ကို Select လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော Menu Bar မှ Layer>New>Background From Layer ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Background From Layer ကို နှိပ်လိုက်ရင် Layer ဟာ Background နာမည်နဲ့ ဖြစ်သွားမှာပါ။
အထက်ပါ ပုံစံများဖြစ်သွားမှာပါ။ ပြီးတော Layer နှစ်ခုလုံးကို Select လုပ်ထားလိုက်ပါ။
အထက်ပါ Layer နှစ်ခုကို Select လုပ်ပြီးရင် Tool Option Bar မှ အောက်ပါ ပုံကဲ့သို့ အနီကွက်နဲ့ ကွက်ထားတဲ့ နှစ်ကို Click လိုက်ပါ။
အထက် ပုံမှာ အနီကွက်ထားတဲ့ နှစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ရင်. အောက်ပါပုံကဲ့သို့ ပုံဟာ အညီကျသွားမှာပါ။
ကဲ့ပြီးသွားပါပြီး. ဒါဆိုရင် မိမိကြိုက်သလို Passport size တွေ့လုပ်လိုရပြီး ဆိုင်ကိုသွားစရာ မလိုတောဘူးပေါ့။ ကဲ့ print သာ ထုပ်လိုက်ပါတော…………….အားလုံးပျော်ရွင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။